“Aaran-Jaan waa iskaashatada Shaydaanka!” – Nuqul ka tirsan buug uu Gaas uga sheekaynayo wixii kala qabsaday Kooxdii Faroole – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
“Aaran-Jaan waa iskaashatada Shaydaanka!” – Nuqul ka tirsan buug uu Gaas uga sheekaynayo wixii kala qabsaday Kooxdii Faroole
By Radio Dalsan Reporter	 On Sep 19, 2019
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ahaa Madaxweynihii hore ee dowlad Goboleedka Puntland ayaa waxaa lagu wadaa in dhawaa dalka Mareykanka uu kusoo bandhigyo Buug uu qoray,kaasi oo lagu magacaabo “Caqabadihii kalaguurka Soomaaliya” (A Challenging Transition in Somalia).
Buuga uu qoray Cabdiweli gaas ayaa waxaa uu uga sheekeynayan xili uu doonayay inuu socdaal ku tego Magaalada Boosaaso ay ishor istaag ku sameeyeen Xukuumaddii Madaxweynihii Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole,waxaana xiligaas uu wareejiyay xilka Ra’isal Wasaarenimo ee Soomaaliya.
Nuqul kamid ah buuga uu qoray Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ahaa Madaxweynihii hore ee dowlad Goboleedka Puntland ayaa u qoran sidan.
“Waxaan wacay Faroole, kama uusan jawaabin Telephonekayga, dabcan wuu yaqaaney lambarkayga laakiin sida muuqata markan wuu naqdiyey wicistayda, deedna waxaan go’aansaday in aan waco mi kamid ah dadka ugu dhow kooxdiisa oo ah Cali Yuusuf Cali (Cali Xoosh ) wasiir kuxigeenkii arrimaha gudaha. waa mid kamid ah koox ka kooban ilaa 12 qof oo loo yaqaano Aaran Jaan ama “Iskaashatada Shaydaanka” caadi ahaanna waa kooxda hoggaanka Faroole ku xeeran oo aad saamayn ugu leh xukunka jira iyo go’aamada, xataa waxay aad uga awood badan yihiin Wasiirradda Faroole. Waxay ahaayeen wasiiradiisa daaha gadaashiisa istaagan.
Cali si deg deg ah ayuu Telefoonka iiga qabtay waxaana ku iri, “Cali waan filayaa inaad ogtahay waxa ka socda Boosaaso. ii sheeg sababta aad xoogga ugu faanayso iyo sababta ciidamadu guriga ugu hareeraysan yihiin.”
Sidoo kale waxaan u sheegay inuu wacay Madaxweynaha balse uu iga qaban waayey telefoonka.Wuxuu ii sheegay in badanaa ”Madaxweynuhu mashquul yahay” ama hadii kale uu qayb ka yahay arinka ee i sug aan hubiyee.
Daqiiqado kaddib wuu isoo wacay, wuxuu san se ii sheegin ayaa ahayd in wiilka Faroole ee Maxamed uu dhegaysanayey wada hadalkeenna.
Madaxweynihii dalka Tunisia oo geeriyooday